Wararka - Halka loo isticmaalo qaybaha caagga ah
Qaybaha caaga ah waxaa lagu sameeyaa iyada oo loo marayo qaabaynta qaabab kale oo wax lagu farsameeyo, kuwaas oo cabirkooda iyo shaqadoodu ay buuxinayaan shuruudaha naqshadayaasha.
In kabadan 80% ee qaybaha balaastigga ah waxaa lagu shubay mideynta cirbadeynta, taas oo ah habka ugu weyn ee lagu helo qaybo balaastig ah oo sax ah.
Qaybaha caaga ah ee la isku duro iyo alaabooyinka ayaa dhexgalay dhammaan dhinacyada waxqabadka aadanaha, oo si ballaaran loogu adeegsado isgaarsiinta elektarooniga ah, qalabka korontada, korantada, qalabka, amniga, taraafikada baabuurta, daryeelka caafimaadka, qalabka nolol maalmeedka iyo dhinacyada kale.
Qaybaha ugu muhiimsan ee alaabtu waa:
1. Isgaarsiinta alaabada elektarooniga ah iyo macaamiisha elektarooniga ah (guryaha balaastigga ah, xayndaabka, sanduuqa, daboolka)
Telefoonada gacanta, samaacadaha dhagaha, telefishanka, telefonada fiidiyowga, mashiinada POS, gambaleelka albaabka.
2. Qalabka korontada (kiiska balaastigga ah, daboolka, weelka, salka)
Kafee sameeyaha, sharaabka, qaboojiyaha, qaboojiyaha, mashiinka mashiinka lagu dhaqo iyo foornada microwave.
Mitirka korontada, sanduuqa korantada, kabadhka korontada, qalabka isweydaarsiga, daboolka daboolka iyo shidma
4. Qalab (guryaha caagga ah, dabool)
Voltmeter, multimeter, barometer, baaraha nolosha
5. Qaybaha gawaarida
Qaab dhismeedka dashboardka, qeybta batteriga, qeybta hore, sanduuqa kontoroolka, kursiga taageerada kursiga, mandheerta firaaqada, foorarka, bumboorka, daboolka jiifka, carqaladda buuq, albaabka gadaal gadaashiisa
Qaybaha caaga ah ee baabuurta
6. Qalabka taraafikada iyo qalabka baabuurta (daboolka nalka, xarkaha)
Laydhka, calaamadda, tijaabiyaha aalkolada,
7. Daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka
Nalalka qalliinka, sphygmomanometer, sirinjiye, daadiyaha, dhalada daawada, duugista, qalabka timaha laga saaro, qalabka jirdhiska
8. Baahiyaha maalinlaha ah
Kuraas caag ah, burushka caday ee balaastigga ah, saxanada balaastigga ah, baaldiyo balaastig ah, balaastik, koobabka balaastigga ah, muraayadaha, daboolida musqusha, barkadaha, qalabka caruurtu ku ciyaarto
Badeecadaha kala duwan waxay u baahan yihiin cabbirro kala duwan, qaabab, qaab ciyaareed, muuqaal iyo adeegsi, sidaa darteed waxaa jira noocyo kala duwan oo wasakhahaasi ah iyo geedi socodka wax taaj oo kale oo loo adeegsado sameynta.
Mestech waxay leedahay in kabadan 10 sano oo ah soo saarista caaryada cirbadeynta iyo khibrada wax soo saarka cirbadeynta, waxaan ku siin karnaa qaab-dhismeedyo isku-dhafan oo la isku qurxiyo iyo alaabooyinka iyo adeegyada la isku duro sida waafaqsan qeexitaankaaga.
2. cirbadeynta cirbadaha loogu talagalay qaybo yaryar, qaybo waaweyn, xargaha, geerka, qolofka, laba midab, iyo wax lagu dhejiyo biraha.
3. Daahan ama qurxinta dusha sare: daabacaadda shaashadda, rinjiyeynta buufin, electroplating, qurxinta caaryada gudaha, daabacaadda wareejinta biyaha.
Haddii aad u baahan tahay badeecooyin caag ah oo loogu talagalay alaabtaada, ama aad u baahan tahay inaad wax badan ka ogaato, fadlan la xiriir shirkadda 'Mestech' si aad uga soo xigato ama u hesho macluumaad dheeraad ah.